GPS Tracker ကစိတ်မချရသောပါတနာကိုဖမ်းရန်ကူညီနိုင်ပါသလား။ - OMG Solutions
GPS နဲ့အတူလိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုကိုဘယ်လိုဖမ်းနိုင်မလဲ။ ကားဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ သူတို့ပြောတာကခင်ဗျားရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်လား။ သင်၏ကားလိပ်စာကိုဟိုတယ်မှာရပ်ထားပါသလား။ သငျသညျအလုပျအပြီးတူညီတဲ့အိမ်သို့အမြဲသွားပါသလား? သို့ဆိုလျှင်သင်၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးသည်ကလိမ်နိုင်သည်။ GPS အသုံးပြုခြင်းသည်လိမ်လည်လှည့်စားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွန့်စားမှုနှင့်အလုပ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သူတို့ကိုသင်လိုက်ရန်မလိုပါ။ မင်းကွန်ပျူတာကိုထိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တာပဲ။
စံပြကမ္ဘာတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတိုင်းသည်သူတို့၏ကတိသစ္စာအတိုင်းအသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ ဝမ်းနည်းစရာကအိမ်ထောင်သည်တွေဟာသစ္စာမဲ့တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ သစ္စာမဲ့သူများသည်ခဲယဉ်းသည်။ သင်သစ္စာမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သက်သေအထောက်အထားအတွက်သင်၏ဖုန်းကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ နည်းပညာနှင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးချပရိုဂရမ်များကသစ္စာမဲ့သောခင်ပွန်းကိုသူမသိဘဲခြေရာခံနိုင်စေသည်။ ပိုက်ဆံမဖြည့်ဘဲသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုခြေရာခံရန်နည်းလမ်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါသည်။
လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်များသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်များ၏ခေတ်ကုန်သွားသည်။ ယခုသင်သည်သင်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုထောက်လှမ်းရေးအတွက် GPS tracker ရှိသည့်ကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
သင်၏ကြံဆတီထွင်ထားသောကိရိယာများ - ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် GPS Tracker တစ်ခုသို့မဟုတ်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသောအရာဝတ္ထု!
ဒီဆောင်းပါးကိုရေးသားတဲ့အခါဒီကိရိယာတွေအကြောင်းအများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ အမှန်မှာ၊ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အရာဝတ္ထုများအားလုံး (ရိုးရှင်းသောအင်တာနက်ရှာဖွေမှုတစ်ခုကြောင့်) နှင့်စျေးနှုန်းအားလုံးတွင်ရှာဖွေနိုင်သည့်အရာဝတ္ထုများနှင့် GPS tracker များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒီအရာဝတ္ထုအများစုကို ၀ ယ်ထားတာကိုငါတို့သိလိုက်ရတော့ငါတို့အံ့သြသွားတယ်။ သူ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုစူးစမ်းပါ။
သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကဖောက်ပြန်မှုရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကမှားယွင်းကြောင်းဝန်ခံသူကဝန်ခံခဲသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌အလုပ်လုပ်ရန်အချက်ပြချက်များ မှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်၎င်းအပြောင်းအလဲများအတွက်သင့်လျော်သောရှင်းပြချက်မပေးဘဲသူ၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်ပြန်မှုသို့မဟုတ်နားလည်မှုလွဲခြင်း၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်သင်ခေါ်သည့်အခါသူတို့သည်ဖုန်းမခေါ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ကားမောင်းနေခြင်းနှင့်မဖြေနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုနိုင်သည်။ မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုသံသယဝင်ရင်သူတို့ကတိသစ္စာကိုဖောက်ဖျက်နေသလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့သစ္စာမဲ့သူခင်ပွန်း၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူတို့ဖောက်ဖျက်မှုရှိမရှိ၊ ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်ပြန်မှုသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီးသစ္စာမဲ့သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကျွမ်းကျင်သူများကရှင်းပြသည် -
စိတ်ခံစားမှု - သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်နှင့်လက်ထပ်ခြင်းပင်လျှင်အခြားသူနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည်။
ရူပေဗဒ - သူတို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမြင်နေကြသောအခါ။
Circumstantial - ထိုအချိန်တွင်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည်ပြုမူသည်
သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်နှင့်အခန်းတစ်ခန်းမျှဝေနိုင်ပြီးအခြားသူတစ် ဦး ဦး အပေါ်သစ္စာမဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုမတူညီသောအချက်အလက်ပုံစံများကိုစုဆောင်းရန်၊ ၎င်းတို့သည်သစ္စာမရှိ၊ မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်သိရမည်
သစ္စာမဲ့သူကိုဘယ်လိုခြေရာခံမလဲဆိုတာသင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းမှာသင့်ကြင်ဖော်၏ယာဉ်တွင် GPS စက်တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ GPS သည်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးပေးသည်။ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်မည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုအချို့သောအချိန်များတွင်သင်သိလိုပါက GPS သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ GPS စက်ပစ္စည်းများသည်အမှန်ပင်ထိရောက်မှုရှိပြီးသင်ငွေအမြောက်အများမသုံးပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းများ၌သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုခေါ်ဆိုရန်သင့်အားအခွင့်အရေးမရှိသောကြောင့် GPS စက်များသည်အမြဲအသုံးဝင်သည်မဟုတ်ပါ။
သစ္စာမဲ့မှုကိုအတည်ပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၏စမတ်ဆဲလ်ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းကိုသူလျှိုလုပ်တာကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျတွေ၊ ခေါ်ဆိုမှုတွေကိုစစ်ဆေးပြီးသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့တည်နေရာကိုတောင်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
သစ္စာမဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုမည်သို့အခမဲ့ခြေရာခံနိုင်မည်နည်း။ နည်းတစ်နည်းမှာသင့်ကြင်ဖော်၏လှုပ်ရှားမှုများကို GPS ဖြင့်ခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းအများစုမှာသင့်ရဲ့ခင်ပွန်းဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာရှာဖွေရန် GPS ခြေရာခံစနစ်ရှိသည်။ ဖုန်းတွင်မည်သည့်ခြေရာခံကိရိယာတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ GPS ကိုအားကိုးခြင်း၏အားနည်းချက်မှာခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ WhatsApp ပြောဆိုမှုများနှင့်အခြားအရာများကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ mobile tracking application application တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ Android သို့မဟုတ် iOS စနစ်အတွက် application များစွာရှိသည်။ သူလျှိုအသုံးချပရိုဂရမ်များကသင့်အားသင်၏ခင်ပွန်း၏ဆဲလ်ဖုန်းကို GPS အပါအဝင်သင့်အားအိမ်ရှင်၏အင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်
ခြေရာခံရန် GPS ကိရိယာကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
သင် GPS စက်တစ်ခုမ ၀ ယ်မီအရာအနည်းငယ်သိရန်အရေးကြီးသည်။ စတင်သူများအတွက်သင်ဟာသမားရိုးကျ GPS တစ်ခုကိုမလိုချင်ဘူး။ ဤအမျိုးအစားများကိုရုပ်မြင်သံကြားတွင်ကြော်ငြာပြီးလက်လီအရောင်းဆိုင်အများစုတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေက GPS ကိရိယာတွေပါ။ ဒါပေမယ့်သင်လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကယာဉ်မောင်းတွေကိုညွှန်ကြားချက်တွေပေးသင့်တယ်။ သင်က built-in မျက်နှာပြင်ပါသော GPS တစ်ခုကိုမလိုချင်ပါ။ ဤကိရိယာများသည်ရံဖန်ရံခါဆူညံသံများဖြစ်စေပြီးတောက်ပသောမျက်နှာပြင်သည်ကောင်းစွာဖုံးကွယ်ထားသည့်တိုင်၎င်းကိုအာရုံစိုက်စေနိုင်သည်။ ဒါဆိုမင်းဘယ်လို GPS မျိုးကိုလိုချင်တာလဲ။
လိမ်လည်လှသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖမ်းချင်သောခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးတို့သည် forwarders များ အသုံးပြု၍ GPS tracker များကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ယာဉ်မောင်းများကိုခြေရာခံရန်ဤကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကယာဉ်မောင်းတွေဘယ်မှာလဲ၊ အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ထားမလား၊ သူတို့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မလားဆိုတာကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကကူညီပေးတယ်။ ဒီကိရိယာအများစုဟာယာဉ်အုပ်စုတစုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပေမဲ့၊ စနစ်အများစုမှာကားတစ်စီးချင်းစီကိုခြေရာခံခွင့်ပြုထားပာတယ်။
လျှို့ဝှက် GPS လမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ်ရေယာဉ်စု GPS လမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပုံမှန်ရှာဖွေပါ။ သင်ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်သောအခါသင်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခုလိုချင်သည်။ မျက်နှာပြင်ကြီးမပါပဲကြိုးမဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်။ အနက်ရောင်သည်အကောင်းဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။ သင်ရရှိသောအရာကိုကြည့်ရှုရန်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ပြည့်စုံသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အတူစနစ်တစ်ခုမှာအမှာစာ။ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏ကားတည်ရှိရာနေရာကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သင်မသိချင်ပါ။ ရလဒ်များကိုမြေပုံပေါ်တွင်ပြသစေချင်သည်။ သင်သည်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့်ဂူးဂဲလ်မြေပုံများနှင့်အစီအစဉ်များကိုရှာပါ။ သင်၏ဇနီး / ခင်ပွန်း၏ကား၏တည်နေရာကိုချဲ့ကြည့်ပါ။ သင်၌မည်သည့်အဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်သည်ကိုဤအရာကဆုံးဖြတ်သည်။
လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖမ်းရန်သော့သည်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဇနီး၏ GPS ကိုသြဒီနိတ်အရသူမသည်ဒေသခံဟိုတယ်တစ်ခု၏ကားရပ်နားရာနေရာတွင်ရှိသည်။ သူမကိုသူမ၏ရောက်လာသောအခါလှည့်စားသည်ဟုစွပ်စွဲမထားပါနှင့်။ ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အပတ်အနည်းငယ်အတွက်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံပါ။ သူမဟိုတယ်ကိုဘယ်နှစ်ခါလာတက်တာလဲ အလုပ်မှအိမ်သို့သွားသောလမ်းတွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအနားယူမှုများပြုလုပ်သောကြောင့်သူသည်သူလိမ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ စွပ်စွဲချက်များကိုမလွှတ်မီပုံစံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လျှို့ဝှက် GPS လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဤပုံစံကိုသတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်နောက်တွင်ဘာဆက်ဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
7994 စုစုပေါင်း Views စာ 1 Views စာယနေ့တွင်